Global Voices teny Malagasy · 20 Janoary 2012
Tantara tamin'ny 20 Janoary 2012
Mediam-bahoaka20 Janoary 2012
Manely ny heviny ireo mpanao gazetim-bahoaka miaro ny tontolo iainana ao amin'ny Nomad Green mikasika ireo olana manodidina ny tontolo iainana mihasimba any Mongolia. Navoaka amin'ny teny Mongoliana ireo lahatsoratra ireo ary voadika amin'ny teny Anglisy sy Sinoa ny sasany amin'izy ireo.Mijery ny sasany amin'ireo vaovao vao haingana ao amin'ny...
Iràna20 Janoary 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana20 Janoary 2012
Ny taona 2011, ireo mpandika teny an-tsitrapo ao amin'ny Global Voices izay miteny Frantsay dia nahavita nandika lahatsoratra an-jatony ary nampahafantatra ny vaovao manerana izao tontolo izao ary tianay ny hiteny hoe "Misaotra!". Nanontanianay hoe inona ny fandikàna nanamarika azy ireo indrindra, nandritra iny taona lasa iny. Ireto ny safidin'ireo...
Amerika Latina20 Janoary 2012
Singapore: Mampiparitaka Ireo Meme Ao Amin'ny Aterineto Ny Tsikeran'ny Minisitra
Azia Atsinanana20 Janoary 2012
Fantaro ny nahatonga ity fehezanteny ‘Rehefa nanapa-kevitra aho…' ity ho lasa meme ao amin'ny aterineto any Singapore izay avy amina tsikerana minisi-panjakana ambony. Manaraka ny fanapahan-kevitry ny governemanta vao haingana hanapaka ny karaman'ireo mpanao politika izay avo karama indrindra eran-tany izany.
REPACTED: Manao Jeritodika Ary Maka Lesona Avy Amin'ny Lasa
Ny mpisitraka ny famatsiam-bolan'ny Rising Voices, REPACTED, teo aloha dia nanofana ireo Kenyana nafindra toerana (nandritry ny herisetra tamin'ny fifidianana ny taona 2007) mipetraka an-toby ny fomba hilazàny ny tantarany manokana ao amin'ny aterineto ka amin'izany dia tsy nohadinoina ny zava-tsarotra niainan'izy ireo.Hisy ny fifidianana manaraka ao Kenya amin'ity taona...
Peroa : Mozika Krismasy Afro-Peroviana
Ny Krismasy, fankalazana iray izay nentin'ny Espaniola tao Peroa tany amin'ny fanombohan'ny taonjato faha enina ambin'ny folo, dia neken'ireo vondrom-piarahamonina samihafa tao amin'ny firenena tsikelikely nandritra ny taona maro. Iray amin'ireny indrindra , ny vondrom-piarahamonin'ny mainty hoditra, izay saiky niara-tonga tamin'ireo Eropeana, sady Kistianina mafàna fo, no nahavita nampiditra ny...